Hisy ny hetsika ao amin'ny App Store amin'ny herinandro | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo fiasa natolotr'i Apple tamin'ny WWDC 2021 farany teo tao anatin'ireo fiasa vaovao iOS 15 sy iPadOS 15, ary izany nandalo tsy nisy fanaintainana na voninahitra teo amin'ireo mpampiasa, Izy io dia ny fanampiana ilain'ny mpamorona hamoronana hetsika ho an'ny fampiharana azy ireo.
Hanomboka hisy io fampiasa io hatramin'ny Alarobia 27 Oktobra Ary manomboka izao, ireo mpandrindra izay te hanomboka hampiasa azy io dia afaka mandahatra ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny App Store Connect.
Apple dia nanao an'ity fanambarana ity tamin'ny alàlan'ny tranonkala natolotr'i Apple ho an'ny vondrom-piarahamonim-pampandrosoana. Ny fisehoan-javatra ao anatin'ny App Store dia ahafahan'ny mpamorona manamboatra hampiroborobo ny fifaninanana, fampielezam-peo mivantana, premieres film, hetsika manokana… Ho an'ireo mpampiasa mbola tsy nanao an'izany, misintona ary andramo ilay fampiharana.
Manomboka amin'ny herinandro ambony, ny zava-mitranga ao anaty fampiharana dia mety ho hita mivantana ao amin'ny App Store, manome anao fomba vaovao hanehoana ireo zava-nitrangao ary hanitatra ny zavatra azonao. Ankehitriny ianao dia afaka mamorona hetsika avy amin'ny fampiharana amin'ny App Store Connect ary manomana azy ireo hiseho ao amin'ny App Store. Ireo hetsika ara-potoana ireo, toy ny fifaninanana lalao, première premières, ary traikefa mivantana mivantana, dia afaka mandrisika ny olona hanandrana ny fampiharana anao, hanome ny mpampiasa efa misy fomba vaovao hankafizany ny fampiharana anao, ary hanome ny antony hampiasan'ny mpampiasa teo aloha hiverina. Hiseho ao amin'ny App Store amin'ny iOS 15 sy iPadOS 15 manomboka ny 27 Oktobra 2021 ny hetsika
Ny zava-mitranga ao amin'ny fampiharana dia haseho amin'ny karatra hetsika ao amin'ny App Store izay misy sary na horonan-tsary, ny anaran'ny hetsika ary famaritana fohy.
Ao amin'ny iOS 15 sy iPadOS 15 ihany
Apple dia nanandrana io fampiasa io aogositra farany ao amin'ny betas an'ny iOS 15 sy iPadOS 15, hanafoanana azy io avy eo. Ireo karatra ireo dia tsy ho hita afa-tsy amin'ny dikanteny fahadimy ambin'ny folo an'ny iOS sy iPadOS ary tsy ho azo amin'ny kinova taloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny hetsika ao amin'ny App Store dia ho hita amin'ny herinandro ambony
Nilaza i Mark Gurman fa tsy hisy hetsika Apple amin'ny volana Novambra